ATECC608: chengetedzo module yeRaspberry Pi | Mahara emahara
ATECC608: chengetedzo module yeRaspberry Pi
ari IoT mapurojekiti Ivo vari kuwedzera kuve vanozivikanwa pakati pevagadziri uye nyanzvi dzinovakirwa pamabhodhi ekuvandudza akadai seArduino kana avo vega Raspberry Pi SBC. Kuchengetedzwa mumapurojekiti aya kwakakosha, nekuti vanogona kurwiswa vari kure kana mabasa avo kuchinjwa kana paine kushomeka. Ndiko kunetsekana uko ATECC608 inouya kuzogadzirisa.
Kusvika parizvino pakanga paine akawanda mamodule uye zvinhu zvekugadzira mapurojekiti emarudzi ese, asi mashoma akanyatso tarisa kusimbisa chengetedzo kusvikira ichi chinhu che iyo Microchip kambani, Iyo inozivikanwa yekuvandudza yezvigadzirwa senge yayo PIC microcontroller.
1 Nezve ATECC608
1.1 Unyanzvi hunhu hweATEC608
Iyo purojekiti ATECC608 Iyo inokutendera iwe kuwedzera Microchip chengetedzo chip kune yako Raspberry Pi, kuti igone kudzivirira yako IoT dhizaini pakurwisa kwepanyama uye kure kurwisa. Uye zvakare, iyo module iri diki kwazvo, uye iri nyore kubatana neRasbperry Pi, pamusoro pekuve nemutengo we $ 10 chete.
ATECC608 iri chaizvo nyore kushandisa, iwe unongo fanirwa kuibatanidza neiyo Raspberry Pi ichitevera yayo inokurumidza gwara iwe yaunowana mune izvi GitHub kero. Mushure meizvozvo, yakagadzirira kushandisa ne Python mienzaniso inowanikwa pane iyo GitHub neMicrochip iyo iwe yaunowana mune ino imwe link. Uye kana iwe uchinetseka pamusoro pekugadzirwa kwayo, yakavhurika-sosi (CERN OHL v1.2).
Kune avo vasingazive, CERN OHL kana Open Hardware License iri rakavhurika sosi rezinesi inoitirwa mapurojekiti ehurdware. Yakagadzirwa neCERN uye shanduro dzinoverengeka dzakaburitswa, senge iyi v1.2 inova yekupedzisira yakagadziridzwa muna2013.
Zvese zvakagadzirwa neMicrochip tekinoroji, asi yakagadzirirwa ne Kambani yeFrance mgIT.at uye yakagadzirwa neOTS Security.
La zano ndeyekuti inotanga kuve inozivikanwa kuchengetedza mapurojekiti eIoT neRaspberry Pi, kushandisa kubatana kwakachengeteka neTLS, anti-cloning, PKCS11 Token, nezvimwe.
Unyanzvi hunhu hweATEC608
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve ATECC608, iti iwe une zvinotevera features:
Encryption co-processor ine yakachengeteka Hardware password yekuchengetedza.
Kuchengetedza kuchengetedza kusvika pamakiyi gumi nematanhatu, zvitifiketi kana data.
ECDH FIPS SP800-56A Elliptic Curve Deffie-Hellman, isingazivikanwe kiyi yekumisikidza rotocol iyo inobvumidza mapato maviri ane elliptic curves yeruzhinji-yakavanzika kiyi, kumisikidza chakavanzika chakagovaniswa pane isina kuchengetedzeka chiteshi.
NIST P256 standard inotsigirwa
SHA-256 uye HMAC hash
AES-128 yekunyora uye kudonhedza
RNG (Randon Nhamba jenareta) FIPS 800-90 A / B / C.
Kudzokera kumashure kuenderana ATECC508
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » ATECC608: chengetedzo module yeRaspberry Pi
Raspberry Pi Pico: Magadzirirwo uye Zvimiro
Dimmer: gadzira yako kutonga mwenje wako